राष्ट्रपति बहसअघि काेभिड भएकाे थियाे ट्रम्पलाई बिहीबार, मंसिर १६, २०७८
‘स्वर्गको टुक्रा’ मा सरकारी पूजा आइतबार, असोज ३, २०७८
हजुरआमाको तीज सम्झना: तीज आयो कि मन रुन्थ्यो ! बुधबार, भदौ २३, २०७८
जीवन बदल्ने १० सर्वश्रेष्ठ किताब एउटा प्रसिद्ध लोकोक्ति छ, पढेर भन्दा परेर जानिन्छ । तर, यो लोकोक्ति पूर्णसत्य छैन, अर्धसत्य छ । त्यो किनभने पढेर पनि जानिन्छ, परेर पनि जानिन्छ । तर पढेर धेरैलाई परेको जानिन्छ, परेर आफुलाई परेको मात्र जानिन्छ । त्यसैले पढेर भन्दा परेर जानिन्छ भन्ने भ्रममा बस्नु कदापि ठीक छैन । शनिबार, भदौ १२, २०७८
अनि म कोरोना अस्पतालबाट भागेँ बिहानको चिसो वातावरण थियो । शरीर कमजोर थियो । बिहान भुकभुको थियो । छङ्ग उज्यालो भइसकेको थिएन । त्यही बखत बलियो मन गराएर कोरोना अस्पतालको बेडबाट उठेर भाग्नको लागि पर्खालतिर गएँ । काँढेतार पन्छाउँदै पर्खालमा चढेंर म बाहिर निस्कें । बाहिर निस्कदाबित्तिकै एउटा युद्ध जितेर आएजस्तो महशुस भयो । सोमबार, जेठ १०, २०७८
कोभिड अस्पताल, संवेदनामैत्री संरचना र मेरो आमाको मृत्यु आमाले वैशाख ६ गते १२ बजे संसार छोडेको दुखद समाचार पहिलोपटक रुद्रले दिए । झिनो आशाको तन्तु थियो त्यो पनि छिन्यो । हामी हतारहतार त्यहाँ पुग्यौं । थुप्रै आफन्तहरु आइपुग्नुभयो । हामी लगभग ३ घण्टासम्म बस्यौं । करिव ४ बजे आमालाई बाहिर ल्याइयो । स्टेचरमा सेतै प्लाष्टिकमा बाँधिएको अवस्थामा आमा आउनु भयो । मुख खुला थियो । आमा भन्दै निहुरिएर परैबाट नमस्ते गरें र फूल चढाएँ । बल्लतल्ल धूपकाँटी सल्काएर आमातिर फर्केर धूप नचाउँदै थिएँ । आमाको मुख हेर्दाहेर्दै एक्कासी पीडाको ज्वालामुखी फुट्यो । म थचक्क बसेर असाध्य रोएँ । मुटुमा गाँठो पर्‍यो । बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
लकडाउनको एक वर्षः ताता सडकमा हिडेका ती पाइलाहरुको हिसाब हुन बाँकी नै छ लाग्छ, सयौं किलोमिटर ताता सडकका ती पाइलाहरु, सडकमै विताइएका ती रातहरु, गरिब वस्तीका ति रित्ता पेटहरु फगत समाजका छद्य आवारण थिए, जो अहिले पृष्ठभूमिमा विलाइसके । हो ! लकडाउन समाजमा ‘क्यामाफ्लज’ भएर रहेको बर्गीय असमानता प्रष्ट झल्काउने ‘लेन्स’ बनेर आएको थियो । बुधबार, चैत ११, २०७७
क्लिभेज क्लिभेज देखिएको फोटोले मेरो डिएमसम्म पाल्नु भएका सज्जनको मात्र होइन, यहाँ कुरा गर्न खोजिएको नियत हो, आशय हो। समाजले कोरिदिएको पहिरनको परिभाषालाई चाहेर वा नचाहेरै मतलब नगर्दा त्यसले निम्त्याउने पुरुष मानसिकता हो। सोमबार, मंसिर २९, २०७७